भी,आई,पी अ,ख,डा छि,रे,का पुरु,ष,ले ज,ब आ,फ्नै, श्रीम,-ती र छो,री भेटे पछी…! – Taja Khawar
भी,आई,पी अ,ख,डा छि,रे,का पुरु,ष,ले ज,ब आ,फ्नै, श्रीम,-ती र छो,री भेटे पछी…!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८ समय: १९:३७:२३
एजेन्सी । खबर सुन्दापनि धेरैलाई अचम्म लाग्छ । तर यो सत्य हो । भारत यस्तो देश हो जसको कुन भूमिमा के भइरहेको छ थाहाँ पाउँदा अर्को ठाँउकै मानिस चकित पर्छन । विश्वकै धेरै भूगोल भएको यो देशमा जनसंख्यापनि धेरै छ । यसैले अनौठा–अनौठा खबर हुन्छन् । सुपर एक्स्प्रेसले छापेको खबर अनुसार एक स्थानीय बेश्यालयमा श्रीमान आफ्नो यौन प्यास मेटाउन पुग्छन् ।
रकम तिरेर यौन कर्म गर्ने कोठामा तयारी अवस्थामा बस्छन् । त्यतिकै यौन प्यास मेटाई दिने युवती अध्यारो कोठमा प्रवेश गर्छिन । मधुरो उज्यालो, आवाज, चाल र हाउभाउले नै थाहा भईहाल्यो की त्यहाँ आफ्नै श्रीमती आएकी छिन् ।
Diet For Lazy! 23 Kg In 1 Month! No Exercise Required!
युवतीलाईपनि थाहा भयो की ग्राहक श्रीमान् हुन् । एकअर्कालाई हेरेर दुबैको होसहवास उड्यो । श्रीमानले जहिले पनि अतिरिक्त खर्चका लागि केही पैसा दिन खोज्दा आफूसँग पर्याप्त पैसा भएको श्रीमतीले बताउने गर्थिन् । यसभित्रको गुह्य अर्थशास्त्र के हो भन्ने चाहिँ उनलाई थाहा थिएन । तर त्यस दिन एकअर्कालाई देखेपछि भने अन्य दिनजस्तो सामान्य स्थिति उनीहरुबीच रहेन ।
श्रीमानले प्वाक्क सोधिहाले यस्तो ठाउँमा तिमी के गर्दैछौ ? उनले श्रीमानलाई रातिराति पार्ट टाइम गर्ने गरेको त बताउने गरेकी थिइन, तर वेश्यालयमा उनी काम गर्छिन् भन्ने कुरा चाहिँ बताएकी थिइनन् । त्यस रात श्रीमान् चाहिँ रमाइलो गर्न बेश्यालय के पुगेका थिए, श्रीमतीलाई भेट्टाए । पछि सोधखोज गर्दा त उनलाई के थाहा लाग्यो भने, त्यो वेश्यालयका सञ्चालकमध्ये उनी पनि एउटी रहिछन् ।
श्रीमानले अखबारलाई भने– ‘म त पक्क परेर उनलाई हेरेको हेरै भएँ । पछि बुझ्दा त उनी त्यो वेश्यालयकी सञ्चालिका पो रहिछन् ।’ विगत १४ वर्षसम्म विवाहित रहेका यी दुवैको सम्बन्ध अब चाहिँ समाप्त हुने भएको छ ।
श्रीमानले पारपाचुकेका लागि निवेदन दिएका छन् । बुझ्दै जाँदा उक्त बेश्यालयमा ती युवतीले आफ्नै कलिलो उमेरकी छोरीपनि पुर्याएको खुलेपछि ती पुरुषले सहनै सकेनन् र सम्बन्ध बिच्छेद गरे । सम्बन्ध बिच्छेदका क्रममा बयान दिएका आधारमा उक्त पत्रिकाले खोजेर यो खबर लेखेको थियो ।
Last Updated on: August 29th, 2021 at 7:26 pm
३५२२१ पटक हेरिएको